Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jabinta Wararka Seychelles » Jasiiradaha Seychelles waxay xushaan shaqaale fog oo fog » Page 2
Jebinta Wararka Caalamka • Jabinta Wararka Seychelles • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Iyadoo ka hadlaysa daahfurka barnaamijka shaqada ee Seychelles khamiistii, Madaxa Fulinta ee Golaha Dalxiiska Seychelles, Mrs. Sherin Francis, waxay xustay in mashruucu ka gudbay booqdaha booqashadiisii ​​khibrada caadiga ahayd.
“Xafiiska arrimaha gudaha wuxuu ku noqday wax caadi ah shaqada inteeda badan shaqaalaha iyo Barnaamijka Shaqada ee Seychelles wuxuu siinayaa fursad ay kaga sii shaqeeyaan guriga 'laakiin goob aad u qurux badan,” ayay tiri.
“Barnaamijku wuxuu ka qaybgalayaa baahidooda maalinlaha ah iyadoo la isku darayo waaya-aragnimada jasiiradda. Ku xirnaanshaha dabeecadda waa qeyb weyn oo ka mid ah waxa aan dooneyno in dadka ay la kulmaan inta ay halkaan joogaan maadaama aysan aheyn kaliya nasasho, laakiin sidoo kale ay gacan ka geysaneyso kobcinta hal-abuurka qofka iyo wax soo saarkiisa, ”ayay tiri Mrs. Francis.
Barnaamijka Shaqada ee Seychelles wuxuu bartilmaameedsanayaa shaqaalaha meelaha fogfog ama qofkasta oo awooda inuu guto waajibaadkiisa banaanka xafiiska dhaqanka iyo jirka, iyadoon loo eegin heerarka qoysaskooda, maadaama ay u adeegto dadka kelida ah, lamaanaha ama xitaa qoysaska.
Barnaamijku wuxuu u furan yahay dhammaan dadka haysta baasaboorrada saxda ah wuxuuna koobayaa adeegyo kala duwan oo taageeraya shaqada fog.
Codsadayaasha suurtogalka ah ee barnaamijka waxaa laga filayaa inay u hoggaansamaan tilmaamaha caafimaadka ee goobta loo socdo. Shuruudaha kale waxaa ka mid ah inaad haysato caymis caafimaad oo sax ah iyo safarka muddada aad ku sugan tahay Seychelles oo dhan.
Barnaamijka Dib-u-gurashada Shaqo ee Seychelles waa iskaashi wada-jir ah oo ka socda hay'ado iyo ururro kala duwan, gaar ahaan Guddiga Dalxiiska Seychelles, Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Seychelles (SCCI), Waaxda Dalxiiska, Guddiga Maalgashiga Seychelles (SIB), Isbitaalka Seychelles & Dalxiiska (SHTA) , Waaxda socdaalka iyo Waaxda Duulista Hawada iyo Badda.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Barnaamijka Dib u gurashada Shaqo ee Seychelles, booqo https://workcation.seychelles.travel